Zviri nyore kunzwa kuneta uye usimbe munguva refu chitima rwendo. Pashure akagara muchitima kwemaawa, zvakakosha ruoko makumbo ako kana zvichiita. A pfupi vanofamba kuti kandini kuchakubatsira kushandisa nguva uye kuti anzwe recharged. Kufamba kuburikidza nengoro kuenda ku kandini, tarisa nzvimbo uye zvimwe dhizeti ane chinwiwa kwaunoda
Vatariri nechitima inogona mumagariro ruzivo. Kuita itsva vanhu pamusoro nezvitima zviri nyore pane dzimwe modes ose senga. Kusiyana ndege, une rusununguko famba uye tichiita nevamwe vafambi. Zvinonakidza zvaungadzidza kubva vamwe vanhu vavo nyaya – kutaura upenyu, basa, uye kukura network yako. Ask the person next to you about the book they’re reading, vapei chinotapira, kana kungo taura hurukuro nezve rwendo vari kuenda. Zvinonzi kupfuura dzamunotaura apo parwendo Europe nechitima kuti pave chigumegume Ndangariro.
The chitima nzendo refu dzimwe chete nguva yakanyarara uchiri rwendo. Inogona kuva tarenda mukana kuti wedzera uye kugadzirira kwako kuenda akasarudzwa. Drink mvura yakawanda, idya chikafu, uye kana zvichibvira, hope. Kushandisa refu chitima rwendo yako nokuchenjera kuchakubatsira unonzwa uchifefeterwa uye kwakapa - akagadzirira yako inotevera rwendo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)